साहित्य Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperसाहित्य Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं । निबन्धकार तथा नियात्राकार युवराज नयाँघरेको ‘याकजी’ निबन्ध संग्रहको विमोचन सम्पन्न भएको छ । प्राज्ञ तथा प्रसिद्ध नाटककार अशेष मल्लले विमोचन गर्नु भएको उक्त नियात्राका कृति तल्लो र माथिल्लो डोल्पाको भूगोल, संस्कृति, जनजीवन र विकटताको वर्णन छ । विमोचनपछि नाटककार मल्लले भन्नुभयो– ‘डोल्पाली समाजको असाध्यै सूक्ष्म वर्णन गरिएको यो कृति कला र शिल्पको हिसाबले […]
समर हुम्ली (कर्णबहादुर रोकाया) बिहानीको सुनौलो किरणसँग झुल्कने हिउँको आभासँग टल्कने निर्मल गंगासँग छल्कने कर्नाली नदीको पश्चिमोत्तर पाटोमा अवस्थित स्थाननामको एक बिन्दु साच्चै ! मेरो श्रीनगर सांस्कृतिक सामाजिक तथा राजनीतिक विविधताको स्थल हुम्लाको खोजी योग्य ठाउँ स्मरणीय गाउँ विशेष सन्दर्भको नाउँ र त–एकतामा विविधता छ । विविधतामा एकता छ । प्रगतिशिलताको बीउ रोप्ने, वैमनस्यताको दाउ […]
पोखरा । अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरलाई साहित्यिक राष्ट्रनायक उपाधिबाट सम्मान गरिएको छ । चितवनको ग्राण्ड मल्टि इन्टरटेनमेन्ट हाउस प्रालि, भरतपुरले उहाँलाई एक समारोह आयोजना गरी सो उपाधिबाट सम्मान गरेको हो । छोटो बसाइँमै साहित्य र संगीतका सिर्जना जति पनि सिर्जित गर्न सक्ने उहाँको क्षमताको कदर गर्दै उहाँलाई सो उपाधि प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । […]
काठमाडौं । कीर्तिमानी गीतकार तथा साहित्यकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ उपन्यास ‘भाइरस लभ’ मनाङमा रहेको तिलिचो तालको उचाईमा लोकार्पण गरिएकोे छ । उपन्यास ‘भाइरस लभ’ तिलिचो तालसँगैको हिमालको पाँच हजार एकसय ६ मिटर उचाईमा लोकार्पण गरिएको हो । पुस्तकलाई पत्रकार कृष्ण भुसाल, गायक तथा संगीतकार सागर अधिकारी ‘शरद’ लगायतले ५ हजार एकसय ६ मिटर उचाईमा […]
पोखरा । गजलकार जनार्दन दाहालको तेस्रो गजल सङ्ग्रह ‘यी मान्छे, यी नजर’ शनिबार तनहुँमा सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्ला साहित्य सङ्गम, दुलेगौँडाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार सरुभक्तले कृतिको लोकार्पण गर्नुभएकाे थियाे । शुक्ला साहित्य सङ्गमले तनहुँको साहित्यिक फाँटमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै सरुभक्तले जनार्दन १ नम्बर प्रदेशका स्थायी वासिन्दाभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशकै एक महत्त्वपूर्ण स्रष्टाका […]
काठमाडौं । जापानबाट विद्यावारिधि गरेका डा. विजय ज्ञवालीको पुस्तक ‘चिजनान’ जापानमा नेपाली कुकहरूको आशा र सङ्घर्ष नामक पुस्तक सार्वजनिक भयो । मनोविज्ञ ज्ञवालीले जापानमा रहेका झण्डै एक लाख नेपाली मध्ये कुक भिसामा पुगेका १२ हजार ४ सय भन्दा बढीको संघर्ष र भोगाइ माथि गरिएको अनुसन्धानलाई गैर अध्ययन शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् । गैर आवासीय […]
आधुनिक इतिहासकै प्रसंगबाट कुरा गरौँ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला उर्फ बिपीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सत्र साल पुस १ गते ‘कु’ गरेर राजा महेन्द्रले सत्ता लिए । बिपीलाई सुन्दरीजल जेलमा लामो समयसम्म महेन्द्रले थुने । त्यसरी थुनेका बेला बिपीले अनेकौँ साहित्यिक कृति लेखे । उपन्यास बढी लेखे । पछि आएर तिनले आत्मजीवनी भने, अनि उतारियो त्यो । उनको […]
काठमाडौंः कवि तथा लेखक रुपक अलंकारको नविनतम् महाकाव्य ‘विश्रान्त’ सार्वजनिक भएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बिच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा. जगत प्रसाद उपाध्याय, समालोचक प्रा. डा रामप्रसाद ज्ञवाली, समालोचक तथा लेखक महेश पौड्याल र लेखक शैलेन्द्र अधिकारीले कृतिको सार्वजनिक गरेका हुन् । फुटकर कविता र निबन्ध लेख्ने अंलकारले पहिलो कृतिका […]
लेखनाथ पोखरेलको हास्य निबन्ध ‘चिबे नकटो’
स्रष्टा लेखनाथ पोखरेलको हास्य निबन्ध ‘चिबे नकटो’ पाठकमाझ आएको छ । केही समयअघि नियात्रासंग्रह ‘फकलीको गाउँ’ र कथासंग्रह ‘मार्बल हाउसकी शालिनी’ पाठकमाझ ल्याउनुभएका पोखरेलको तेस्राे कृति ‘चिबे नकटो’ पाठकमाझ आएको हो । सावित्री पोखरेल प्रकाश रहनुभएको २८० पेजको यो हास्य निबन्धमा विभिन्न परिवेशका विषय वस्तुलाई बढो रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएकोे छ । कृतिभित्रै कै एक […]
सन्तोष खत्री रातिको ९ बजेको थियो, असारको महिना कामबाट आइसकेपछि खाना खाएर सुत्न कोठाभित्र पसेको थिए , बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो। त्यही माथी टिनको छानो, आकाशबाट बर्सिएका ती पानीका छिटाहरुको आवाजले झ्याप्प निद्रा लाग्न सकिरहेको थिएन । फेरि झ्याल पनि खुल्लै रहेछ , चिसो हावाले आङ नै श्रीङ्ग बनायो । त्यो दिन मौसम चिसो […]